A Bịara n'Ezi Oge Biputere na Atụmatụ Mgbasa Azụmaahịa Maka Hotels | Martech Zone
Tuesday, January 23, 2018 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Yikes… ma ọ bụrụ na ị hụbeghị ọnọdụ na-adịbeghị anya n'etiti ịrị elu mgbasa ozi mmekọrịta mmekọrịta Elle Darby na Paul Stenson, onye nwe Dublin's White Moose Café na Charleville Lodge. Mgbe ole Elle Darby kpebiri ịga ezumike, ọ gakwuuru ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ ọ nwere ike ịnwe mmasị ịnọ na ya iji hụ ma ha ga-eweta ọnụnọ ahịa maka ụfọdụ mgbasa ozi site na ndị na-ege ya ntị na mgbasa ozi mmekọrịta.
Onweghi onye na-arịọ maka ego m abụọ, mana achọrọ m ịnye ya. Ekwenyere m na enwere ego maka Mazi Darby na Mazi Stenson:
Maka Mazi Stenson - Nwada Darby bụ nnọọ na-ewe iwe na ọ na-adịghị ghọtara maka ọrụ ọ na-emezu online maka ndị ahịa ya. Ekwenyere m - ndị mmadụ anaghị ahụkarị uru na ọrụ ahụ na ndị na-eweta ọdịnaya na-ahụ. Ma ọ bụ ndị mmadụ anaghị amatakarị ogologo oge na mbọ ọ were n'ezie iji ruo ọkwa ọ bụla. Mazi Stenson ekwesighi iga n'ihu ọha ma wakpo Nwada Darby.
Maka Nwada Darby - Amaara m ma bụrụ ndị enyi na ọtụtụ ndị nwe ụlọ obibi. Ọ bụ ọrụ na-enweghị ekele ebe ị na-arụ ọrụ ụbọchị asaa n'izu ma atụ anya ka ịnye ọrụ kpakpando 7 maka ego 5-star mgbe ụfọdụ. Cheedị echiche ịrụ ọrụ ọtụtụ afọ iji nweta ọnọdụ nke nrọ gị naanị ka ndị chọrọ ịrịọ rịọ gị ahia ịrụsi ọrụ ike maka ikpughe. Ọ bụ ezie na ị ghọtara na ha eledala uru ị nwere ike inye ha anya, ekwenyere m na ị nwere ike ịlele mgbalị ha mere iji wulite ikike na ntụkwasị obi ha na ụlọ ọrụ asọmpi ha.
Maazị Stenson yiri ka ọ na-agbada ala na ohere iji debe isi akụkọ, invoising Nwada Darby maka mgbasa ozi mgbasa ozi na ụda nke $ 6.5. Oh, ọ malitelarị otu eriri akwa.
Ekwetaghị m na nke a bụ ọnọdụ ebe ịtụkwasị obi nke mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta na-egwu ma ọ bụ na ọ bụ ụlọ ọrụ nkwenye. Nke a bụ naanị mmadụ abụọ na-amaghị uru onyinye ibe ha bara. Dị ka ma influencer na onye ọchụnta ego, a na m etinye onwe m ma tinye onwe m n'ọrụ maka nke a. Nzaghachi m abụghị ihe pụrụ iche, mana ọ na - aga n'ihu na - enyere aha m aka. Lee ya ebe a…
Yup… ya. Enweghị mmerụ ahụ, enweghị akwụkwọ ọnụahịa, enweghị nkwupụta ihu ọha, ọ nweghị ọgụ nke ndị dike na-elekọta mmadụ… naanị nzaghachi dị mfe, nkwanye ugwu.
Nke ahụ kwuru, anaghị m apụtakwa na isiokwu 114 n'ofe mba 20.
Ihe m na-eche na nke a bụ na Nwada Darby na Mazi Stenson ka nwere ike ịchọrọ ịpụ na imekọrita ọnụ, ha abụọ enwetala karịa uru ha bara na mgbasa ozi maka mbọ ha. Nke ahụ kwuru, ejighị m n'aka na otu abụọ mepụtara mmetụta ọmịiko, nkwanye ugwu, ma ọ bụ nkwanye ugwu ahụ ha nwere ike iche na ha mere. Ikpe ikpe na ọnọdụ dị n’azụ, dịka m na-eme, ọ dị mfe oge niile ka m wee ghara ịkatọ otu ọ bụla… naanị na-enye ụfọdụ nzaghachi maka ndị na - eme ihe ike na ụlọ oriri na nkwari akụ ndị nwere ike ịchọta onwe ha n’ọnọdụ ndị yiri ya.
Hotels na Influencer ahịa
Ọnụọgụ stats doro anya doro anya na azụmaahịa influencer nwere ike ịdị irè maka ụlọ nkwari akụ. Onye obula chọpụtara na maka $ 1 ọ bụla emere na ahịa influencer, eweghachitere $ 2.26 na uru mgbasa ozi akwụpụtara. Furtherga n'ihu ịkwado Nwada Davis nyere, 63% nke ndị na-azụ ahịa na Europe chọpụtara na echiche ndị edepụtara n'ịntanetị na ndụmọdụ bụ ihe abụọ kachasị arụ ọrụ mgbe a bịara n'ụlọ nkwari akụ [/ bọtịnụ]
Personalzọ m si azụ ahịa ahịa dị iche karịa ọtụtụ, mana na-azọpụta m n'ọnọdụ ndị dị n'elu. My pitch ka ụlọ ọrụ bụ nke a - ka m tinye okwu si n'ebe na mgbe ahụ anyị ga-ahụ otú o si na-arụ ọrụ. Na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, nke ahụ dịtụ iche na na ọnụnọ gị nọrọ na nkwari akụ. Ikekwe enwere ike itinye nkwekọrịta ebe Nwada Darby kwuru ka ọ kwụọ ụgwọ maka ọnụnọ - mana ọ chọrọ ịgwa ha na ya nwere mmetụta na ụlọ ọrụ ha. Mgbe ahụ ọ gaara enye nkwụghachi ma ọ bụ nkwụghachi dabere na nzaghachi. Ihe dika,
“Obodo m mepụtara kemgbe ọtụtụ afọ na-anabata mmelite m na ọtụtụ n'ime ha ga-ezumike ezumike dị nso n'ụlọ obibi gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, M ga-achọ ide banyere ọnụnọ m ma ọ bụrụ na ọ na-ewetara gị azụmahịa ọzọ ma eleghị anya anyị nwere ike ịhazi ọnụego mbelata ma ọ bụ ọnụego n'ọdịnihu. Nessdị mma maara na m na-eche mgbe niile ka m nọrọ na Dublin! ”
O siri ike ma ọlị, nri? Enweghị nsogbu ọ bụla, ọ dịghị ihe ọ bụla… naanị nkwekọrịta n'ihu nke na-esetịpụ atụmanya ma jụọ maka nzaghachi. Na "Mba, daalụ." bụ azịza zuru oke.
Kedu ka nkwari akụ si egosi ROI nke Marketing Influencer?
Ihe omuma a site na Europe na-arụ ọrụ dị ukwuu nke inyere ndị na-ere ahịa Hotel aka ịghọta nloghachi, usoro, na otu esi tụọ mmetụta nke ahịa influencer. Maazị Stenson nwere ike chọọ ile anya! Mgbe Nwada Darby zigara, ọ ga-echere izu ole na ole ma jiri nsonaazụ ya tụnyere mbọ ahịa ndị ọzọ ọ na-akwụ ụgwọ, na-elele anya:
njikọ aka - ọnụ ọgụgụ nke mmasị, nkọwa, na azịza ya na onye na-emetụta ya.
Ọrịa - ugboro ole ekesara ma degharịa ọdịnaya ahụ.
-eso ụzọ - uto ma obu oso n’ime onu ogugu ndi n’eso uzo mgbe ekwuru ha.
Oge oru - obibi biri udu karịrị oge.
okporo ụzọ - okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ na họtel.
iru - mmadụ ole na ole hụrụ post (s).
Ngosipụta: Enweghị m ihe ọ bụla maka ịkekọrịta nnukwu infographic a site na Europe! Anaghị m akpọtụrụ Nwada Darby ma ọ bụ Maazị Stenson.
Tags: elle darbehotelụlọ ọrụ nkwari akụnkwari akụ influencer ahịaụlọ ahịa nkwari akụahịa ahịalarlọ nkwari akụ killarneypaul okonkwoeuropenjemnjem ụlọ ọrụWhite Moose Café na Charleville Lodge